Ny Fifamoivoizana Any Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2017 5:03 GMT
(Marihina fa tamin'ny 11 Aprily 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Mety ho nofy ratsy ho an'ny sambany mitsidika an'i Vietnam ny fifamoivoizana . Na mino izany ianao na tsia, manana ny lalànany ny fitaterana kanefa toa tsy tena liana amin'ny fanarahana azy ireo ny olona. Efa mahazatra ny mahita ireo olona telo na efatra mitaingina moto, indrindra fa ny tanora sy ireo fianakaviana tanora.
Mitohana ny fifamoivoizana indrindra mandritra ny ora fandehanan'ny mpiasa hiasa na hody haingana . Misy ny olona sasany no mitondra ny môtô-ny eny amin'ny sisin-dalana fandehanan-tongotra fa tsy miandry ny fitohanan'ny fiara. Mila ho voadona mihitsy ireo olona mandeha an-tongotra satria miampita ny làlambe izy ireo amin'izany ora izany. Tena manadala be. Tsy dia manam-paharetana ireo mpampiasa ny lalana ary mampiasa ny feo fanairan'ny fiara izy ireo rehefa tapi-dalàn-kaleha, mikiakiaka amin'ny hafa mihitsy aza mba hiala amin'ny làlana. Mila somary masiaka ianao raha tsy izany dia tsy mihetsika eo.
Antony iray hafa ny fitomboan'ny isan'ny fiara eny an-dalana. Mety hieritreritra angamba ny olona fa firenena mahantra sy an-dalampandrosoana i Vietnam, kanefa tsy mampino ny hamaroan'ny fiara ao Hanoi , maro amin'izany no an'ny governemanta saingy mitombo an'isa ihany koa ny an'ny olon-tsotra. Vao haingana, nankatoavin'ny governemanta ny politika mamela ny fanafarana fiara efa niasa, izay mampitombo fotsiny ny fitohanana ao amin'ireo tanàndehibe tahaka an'i Hanoi sy i Saigon.
Ilay bilaogeran'ny sakafo Noodlepie raha nidina tao Saigon dia nanamarika fa “navelany ny fandehanana môtô tao Vietnam tany amin'ny telo na efa-taona lasa izay” satria tena tsy mahazo “fahafinaretana mihitsy izy fa havizanana betsaka fotsiny “. Mba hahitana hoe tahaka ny ahoana fifamoivoizana ao Saigon dia tsidiho ny lahatsariny fohy ao amin'ny lahatsorany.
Na dia olana goavana aza ny fitomboan'ny fampiasana fiara sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana, ny fomba fampiasan'ny olona ny feo fanairan'ny fiara no zavatra tena mahasorena indrindra momba ny fifamoivoizana ao Hanoi. Fahazarana izay tsy misy vokany anefa izany matetika. Ny fametrahana ny feo fanairan'ny môtô ety ivelany no lamaody tena mandrebireby. Mazava ho azy fa tsy azo atao ao an-tanàndehibe izany saingy toa donton'ny habetsahan'ny fifamoivoizana loatra ny polisy misahana ny fifamoivoizana ao Hanoi ka tsy dia afaka manoatra izy ireo. Tena manorisory ny olona hafa izany ary matetika miteraka ny loza. Mba hisorohana ny feo fanairan'ny fiara dia raiso ny torohevitry ny Our Man in Hanoi ary alaivo ny mozikan'ny familiana fiara mandritra ny dia aorianan'ny xe om (taxi-moto).
Nahita ny lafiny miavaka hafa momba ny fifamoivoizana ao Hanoi avy amin'ny “tao anatin'ny poncho-ny aro orana plastika lehibe” ilay bilaogera tao Hanoi izay nandao antsika vao haingana , Hanoi Mark , tao anatin'ny lahatsoratra iray momba ny “sariny sy ny zavatra niainany tena manaitra indrindra” tamin'ny izy nipetraka tao Viet Nam.
Tena misy zavatra mahagaga tsy afaka momba ny fiainan'ny fifamoivoizana ao Vietnam, indrindra ho an'ny vahiny. Na dia izany aza, toa miharatsy ny fepetran'ny fifamoivoizana, fa tsy miha-tsara kokoa. Tena mampiahiahy ny mieritreritra momba ny mety ho toe-javatra hiseho afaka dimy taona any aoriana.